“ထိုအပြုံး “ – စာအုပ်မြို့တော်
ပြင်သစ်စာရေးဆရာ အန်တွိုင်း ဆန်တက်ဇူပေရီ၏`မင်းသားလေး´(The Little Prince) ၀တ္ထုကို စာသမားအတော်များများသိကြပါသည်။
ကလေးများအတွက် နှစ်ခြိုက်ဖွယ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သကဲ့သို့ လူကြီးများအတွက် အတွေးပွားစေသော စာတစ်အုပ်လည်းဖြစ်ကြောင်း
ဖတ်မိသူတို့လေးစားသိမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ `မင်းသားလေး´ကိုသိသော်လည်း ဆန်တက်ဇူပေရီ၏ အခြားဝတ္ထုတို – ရှည်များကိုကား
သိသူနည်းလှပါသည်။ဆန်တက်ဇူပေရီသည် တိုက်လေယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ဖြစ်၍ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း နာဇီတို့နှင့်တိုက်ခိုက်စဉ်
ကျဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီကလည်း သူသည်စပိန်ပြည်တွင်းစစ်တွင် ဖက်ဆစ်များအား ဆန့်ကျင်သည့်ဘက်က
၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ယင်းစစ်ပွဲကာလ သူ့အတွေ့အကြုံတစ်ရပ်ကို မူတည်၍`ထိုအပြုံး´(The Smile)အမည်ရှိ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်
ရေးခဲ့သည်။ ၄င်းဝတ္ထုလေးအကြောင်း ကျွန်တော် ယခုပြောလိုပါသည်။`ထိုအပြုံး´ကိုသူသည် ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်ရေး
သည်လား၊ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်အဖြစ် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းလား ကျွန်တော်မခွဲခြားတတ်ပါ။ သို့သော် ဖြစ်ရပ်မှန်ဟူ……ပဲ ကျွန်တော်ယူခဲ့ပါသည်။
၄င်းစာ၌ ဆန်တက်ဇူပေရီက………. သူ့အား ရန်သူတို့ဖမ်းမိသွားပြီး အချုပ်ခန်းတစ်ခုထဲထည့်ထားလိုက်ကြောင်း၊
ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်သူတို့၏ စက်ဆုပ်မုန်းတီးပုံရသောအကြည့်နှင့် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဆက်ဆံပုံများအရ နောက်နေ့မှာတော့
သူ့အား သတ်မှာမုချဟု သူယူဆခဲ့ကြောင်း ရေးပါသည်။ သည့်နောက် သူဆက်လက်ရေးသားပုံကို ကျွန်တော်မှတ်မိသလိုပြန်ပြောပြပါ
မည်။ ငါ့ကို သတ်ကြတော့မှာမုချဟု ကျွန်တော်သိနေပြီ၊ လူကအကြီးအကျယ် တုန်လှုပ်ချောက်ချားကာ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ
ဖြစ်လာသည်။ အိတ်တွေထဲ လျှောက်နှိုက်ကာ စီးကရက်တစ်လိပ်တလေများ သူတို့ရှာတုန်းကမတွေ့ဘဲ ကျန်ရစ်လေမည်လားဟု
စမ်းကြည့်မိသည်။ ကံအားလျော်စွာ တစ်လိပ်ရသည်။ သို့သော် လက်တွေအကြီးအကျယ်တုန်နေသဖြင့် စီးကရက်ကို နှုတ်ခမ်းမှာပင်
ကောင်းစွာတပ်၍မရချင်။ ဆေးလိပ်ရပြန်တော့ မီးခြစ်ကလိုလာပြန်သည်။ မီးခြစ်လည်းသူတို့ယူသွားသဖြင့် မရှိတော့။ ကျွန်တော့်အား
စောင့်ကြပ်နေသူကိုသံတိုင်ကြားမှနေ၍ ကြည့်မိသည်။သူက ကျွန်တော်နှင့်မျက်လုံးချင်းမဆိုင်။ သေသူတစ်ယောက်နှင့်
ဘယ်သူမျက်လုံးချင်းဆိုင်ချင်မည်လဲ။`မီးခြစ်ရှိရင် တစ်ဆိတ်လောက်ဗျာ´ ကျွန်တော် လှမ်း၍ပြောလိုက်သည်။ သူ ကျွန်တော့်ကို
လှမ်းကြည့်ပြီး ပခုံးတစ်ချက်တွန့်ကာ စီးကရက်မီးညှိပေးရန် လျှောက်လာသည်။ သူအနားကပ်ပြီးမီးညှိပေးနေစဉ်
အမှတ်မထင်သူနှင့်ကျွန်တော် မျက်လုံးချင်းဆိုင်မိသည်။ အဲသည်အခိုက် ကျွန်တော်ပြုံးပြလိုက်သည်။ ဘာကြောင့် ပြုံးပြမိသလဲ
ကျွန်တော့်ဘာသာမသိ။ ကျွန်တော် စိတ်ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်
လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အဲသည်လောက်နီးကပ်နေသည့်အခါမျိုးမှာ ပြုံးမပြနိုင်ဘဲ မနေနိုင်တာလားမပြောတတ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ ပြုံးပြလိုက်မ်ိသည်။ အဲသည့်အခိုက်အတန့်မှာ သူ့နှလုံးသားနှင့်ကျွန်တော့်နှလုံးသားကြား
တစ်နည်းပြောရသော် ကျွန်တော်တို့လူသားဝိညာဉ်နှစ်ခုအကြား လျှပ်စစ်ဝါယာနှစ်ခု ပူးမိသည့်အခါမှာဖြစ်သလို မီးပွားတစ်ခုခုန်
ကူးသွားသည်ဟု ထင်လိုက်ရသည်။ သူ့မှာ နဂိုမူလက ကျွန်တော့်အား ပြန်လည်ပြုံးပြရန် ဆန္ဒမရှိဆိုတာ ကျွန်တော်သိသည်။
သို့သော် ကျွန်တော့်အပြုံးက သံတိုင်များကြားမှနေ၍ သူ့ထံခုန်ကူးသွားပြီးသည့်နောက်တွင် သူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်၌လည်းအပြုံးတစ်
ခုပေါ်လာသည်။ သူကကျွန်တော့်စီးကရက်ကို မီးညှိပေးပြီးနောက် အနားမှခွာမသွားသေးဘဲ ကျွန်တော့်မျက်လုံးများကို
စူးစိုက်စွာပင်ကြည့်ကာ ပြုံး၍နေသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုဆက်၍ပြုံးကြည့်နေသည်။သူသည် အချုပ်ထောင်စောင့်
တစ်ယောက်မဟုတ်တော့၊သူကိုလူတစ်ယောက်အဖြစ် ကျွန်တော်မြင်နေပြီ၊ ကျွန်တော့်ကို သူကြည့်ရှုပုံ၌လည်း အဓိပ္ပာယ်
သစ်တွေပါလာပြီ။ `ခင်ဗျားမှာ သားသမီးရှိလား´သူကမေးသည်။ `ရှိပါတယ်ခင်ဗျ၊ ဟောဒီမှာ ဟောဒီမှာ´ ကျွန်တော် ပျာပျာသလဲ
ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်ကာ ကျွန်တော့် မိသားစုဓာတ်ပုံကို ထုတ်ယူပြီး သူ့အားပြသည်။ သူလည်း သူ့ကလေးများဓာတ်ပုံတွေထုတ်လာကာ
သည်ကလေးတွေနှင့်ပတ်သက်သည့် သူ့အစီအစဉ်များ၊ စိတ်ကူးများ၊ သူတို့အတွက် မျှော်မှန်းထားသည်များကိုပြောပြနေသည်။
တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်တွေအိုင်လာသည်။ ကျွန်တော့်မိသားစုကို ကျွန်တော်မတွေ့ရတော့မှာ
စိုးရိမ်ထိတ်လန့်လှကြောင်း၊ သည်ကလေးတွေကြီးပြင်းအောင် စောင့်ရှောက်နိုင်ခွင့်မရှိတော့မှာ ပူပန်နေသည့်အကြောင်းများ
ကျွန်တော်ပြောမိသည်။ ကျွန်တော့်စကားတွေနားထောင်ရင်း သူ့မျက်လုံးမှာလည်း မျက်ရည်တွေရစ်ဝဲလာသည်။ သည့်နောက်မှာမူ
ဘာစကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲ သူကရုတ်တရက် ကျွန်တော့်ကို အပြင်ထုတ်သည်။ အချုပ်ထောင်ပြင်ဘက်ရောက်လာပြီးနောက်
လမ်းကြိုလမ်းကြားများအကြား တိတ်ဆိတ်စွာပင်ဖြတ်သန်းခေါ်ဆောာင်လာပြီး မြို့စွန်နားရောက်သည့်အခါ ကျွန်တော့်ကိုလွှတ်ပေး
လိုက်သည်။ ထို့နောက် နှုတ်ဆက်စကားတွေဘာတွေလည်းပြောမနေတော့ဘဲ မြို့ဘက်ဆီသူလှည့်ပြန်သွားသည်။ `
ကျွန်တော့်အသက်ကို အပြုံးတစ်ခုက ကယ်ဆယ်လိုက်ခြင်းပေတည်း။´ မှန်သည်။ ဟန်ဆောင်မှုကင်းသောကြိုတင်ကြံရွယ်ချက်
မပါသော ပင်ကိုသဘာဝအပြုံး၊ သို့မဟုတ် လူနှစ်ဦးအကြား အရိုးသားအပွင့်လင်းဆုံး ပေါင်းကူးဆက်သွယ်မှု။ ဆန်တက်ဆူပေရီ၏ သည်ဝတ္ထုလေးကို အလုပ်ခွင်မှာ ကျွန်တော်ပြောပြလေ့ရှိသည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေမှာ
ဂုဏ်သိက္ခာတွေ၊ ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူး ရာထူးအဆင့်အတန်းတွေ၊ ကိုယ့်ကိုအများကဘယ်လိုမြင်စေချင်သည်ဟူသော
ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်တွေ အလွှာအထပ်ထပ်ဖုံးကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကွယ်ကာထားကြသည်။ သို့သော် ဘာတွေဘယ်
လိုဖုံးဖုံးအောက်ဆုံးမှာတော့ တကယ့်လူပုဂ္ဂိုလ်အစစ်အမှန်က ရှိနေသည်ဆိုတာ သိကြမြင်ကြစေလို၍ပဲဖြစ်သည်။
အဲသည်အတွင်းပိုင်း အနက်အရှိုင်းထဲကအရာကို ၀ိညာဉ်ဟုပဲ ကျွန်တော်ဆိုလိုက်ပါမည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်တွင်းက အဲသည်ဝိညာဉ်ဟု
ကျွန်တော်အမည်ပေးလိုက်သော အစိတ်အပိုင်းနှင့်သင့်ကိုယ်တွင်းက အလားတူအစိတ်အပိုင်းတို့ အပြန်အလှန်သိကျွမ်းကြပြီဆိုလျှင်
ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့မျှရန်သူတွေမဖြစ်နိုင်၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်း လည်းမရှိနိုင်တော့။ ယခုတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်သက်ပတ်လုံး ကြိုးစားတည်ဆောက်ထားကြသည့် အလွှာအထပ်တွေ ရစ်ပတ်ဖုံးကွယ်နေသည့်အတွက် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်
အစစ်အမှန်မတွေ့ဆုံနိုင်ကြဘဲရှိနေသည်။ ဆန်တက်ဇူပေရီ၏ ၀တ္ထုက ၀ိညာဉ်နှစ်ခုအပြန်အလှန်တွေ့ထိ သိမြင်သွားကြသည့်
ထူးခြားသောအခိုက်အတန့်လေးအကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲသည်လိုအခိုက်တန့်လေး
တချို့တော့ ကြုံဖူးပါသည်။ ဥပမာ တစ်ခုပြောရလျှင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရုတ်တရက် ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားမိခြင်းမျိုးဆိုပါစို့။
နို့စို့အရွယ်ကလေးငယ်များနှင့်တွေ့ရသည့်အခါမျိုးမှာလည်း အလားတူဖြစ်မိတတ်ကြသည်။ သည်လိုကလေးငယ်မျိုးကိုတွေ့ရသည့်
အခါ ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် ပြုံးမိတတ်ကြသလဲ။ အပေါ်ယံလွှာတစ်ခုမှ ကွယ်ကာထားခြင်းမရှိသူတစ်ဦးကို တွေ့လိုက်မြင်လိုက်ရ၍လား။ သူ၏အပြုံးမှာဟန်ဆောင်မှုအကင်းဆုံးအပြုံး၊ အစစ်မှန်ဆုံးအပြုံးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့သိနေကြ၍လား။ ဒါမှမဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲရှိ ငယ်ဝိညာဉ်က ရွယ်တူအချင်းချင်း သိကျွမ်းခင်မင်ကာ နှစ်လိုအားရစွာ ပြုံးလိုက်မိခြင်းလား။
[မူရင်း။ ။Hanoch McCarty ၏ The Smile] ( ဆရာဖေမြင့်၏ နှလုံးသားအာဟာရစာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်…….)
ပွငျသဈစာရေးဆရာ အနျတှိုငျး ဆနျတကျဇူပရေီ၏`မငျးသားလေး´(The Little Prince) ၀တ်ထုကို စာသမားအတျောမြားမြားသိကွပါသညျ။ကလေးမြားအတှကျ နှဈခွိုကျဖှယျပုံပွငျတဈပုဒျဖွဈသကဲ့သို့ လူကွီးမြားအတှကျ အတှေးပှားစသေော စာတဈအုပျလညျးဖွဈကွောငျး
ဖတျမိသူတို့လေးစားသိမှတျခဲ့ကွပါသညျ။ `မငျးသားလေး´ကိုသိသျောလညျး ဆနျတကျဇူပရေီ၏ အခွားဝတ်ထုတို – ရှညျမြားကိုကား
သိသူနညျးလှပါသညျ။ဆနျတကျဇူပရေီသညျ တိုကျလယောဉျမှူးတဈယောကျဖွဈ၍ဒုတိယကမ်ဘာစဈအတှငျး နာဇီတို့နှငျ့တိုကျခိုကျစဉျ
ကဆြုံးသှားခဲ့ပါသညျ။ ဒုတိယကမ်ဘာစဈမတိုငျမီကလညျး သူသညျစပိနျပွညျတှငျးစဈတှငျ ဖကျဆဈမြားအား ဆနျ့ကငျြသညျ့ဘကျက
၀ငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့ပွီး ယငျးစဈပှဲကာလ သူ့အတှအေ့ကွုံတဈရပျကို မူတညျ၍`ထိုအပွုံး´(The Smile)အမညျရှိ ၀တ်ထုတဈပုဒျ
ရေးခဲ့သညျ။ ၄ငျးဝတ်ထုလေးအကွောငျး ကြှနျတျော ယခုပွောလိုပါသညျ။`ထိုအပွုံး´ကိုသူသညျ ကိုယျတှဖွေ့ဈရပျတဈခုအနဖွေငျ့ရေး
သညျလား၊ ၀တ်ထုတဈပုဒျအဖွဈ ဖနျတီးခဲ့ခွငျးလား ကြှနျတျောမခှဲခွားတတျပါ။ သို့သျော ဖွဈရပျမှနျဟူ……ပဲ ကြှနျတျောယူခဲ့ပါသညျ။
၄ငျးစာ၌ ဆနျတကျဇူပရေီက………. သူ့အား ရနျသူတို့ဖမျးမိသှားပွီး အခြုပျခနျးတဈခုထဲထညျ့ထားလိုကျကွောငျး၊
ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျသူတို့၏ စကျဆုပျမုနျးတီးပုံရသောအကွညျ့နှငျ့ ကွမျးကွမျးတမျးတမျးဆကျဆံပုံမြားအရ နောကျနမှေ့ာတော့
သူ့အား သတျမှာမုခဟြု သူယူဆခဲ့ကွောငျး ရေးပါသညျ။ သညျ့နောကျ သူဆကျလကျရေးသားပုံကို ကြှနျတျောမှတျမိသလိုပွနျပွောပွပါ
မညျ။ ငါ့ကို သတျကွတော့မှာမုခဟြု ကြှနျတျောသိနပွေီ၊ လူကအကွီးအကယျြ တုနျလှုပျခြောကျခြားကာ ခွမေကိုငျမိ လကျမကိုငျမိ
ဖွဈလာသညျ။ အိတျတှထေဲ လြှောကျနှိုကျကာ စီးကရကျတဈလိပျတလမြေား သူတို့ရှာတုနျးကမတှဘေဲ့ ကနျြရဈလမေညျလားဟု
စမျးကွညျ့မိသညျ။ ကံအားလြျောစှာ တဈလိပျရသညျ။ သို့သျော လကျတှအေကွီးအကယျြတုနျနသေဖွငျ့ စီးကရကျကို နှုတျခမျးမှာပငျ
ကောငျးစှာတပျ၍မရခငျြ။ ဆေးလိပျရပွနျတော့ မီးခွဈကလိုလာပွနျသညျ။ မီးခွဈလညျးသူတို့ယူသှားသဖွငျ့ မရှိတော့။ ကြှနျတေျာ့အား
စောငျ့ကွပျနသေူကိုသံတိုငျကွားမှနေ၍ ကွညျ့မိသညျ။သူက ကြှနျတျောနှငျ့မကျြလုံးခငျြးမဆိုငျ။ သသေူတဈယောကျနှငျ့
ဘယျသူမကျြလုံးခငျြးဆိုငျခငျြမညျလဲ။`မီးခွဈရှိရငျ တဈဆိတျလောကျဗြာ´ ကြှနျတျော လှမျး၍ပွောလိုကျသညျ။ သူ ကြှနျတေျာ့ကို
လှမျးကွညျ့ပွီး ပခုံးတဈခကျြတှနျ့ကာ စီးကရကျမီးညှိပေးရနျ လြှောကျလာသညျ။ သူအနားကပျပွီးမီးညှိပေးနစေဉျ
အမှတျမထငျသူနှငျ့ကြှနျတျော မကျြလုံးခငျြးဆိုငျမိသညျ။ အဲသညျအခိုကျ ကြှနျတျောပွုံးပွလိုကျသညျ။ ဘာကွောငျ့ ပွုံးပွမိသလဲ
ကြှနျတေျာ့ဘာသာမသိ။ ကြှနျတျော စိတျဂနာမငွိမျ ဖွဈနတောကွောငျ့လညျးဖွဈနိုငျသညျ။ ဒါမှမဟုတျ
လူတဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ အဲသညျလောကျနီးကပျနသေညျ့အခါမြိုးမှာ ပွုံးမပွနိုငျဘဲ မနနေိုငျတာလားမပွောတတျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောကတော့ ပွုံးပွလိုကျမျိသညျ။ အဲသညျ့အခိုကျအတနျ့မှာ သူ့နှလုံးသားနှငျ့ကြှနျတေျာ့နှလုံးသားကွား
တဈနညျးပွောရသျော ကြှနျတျောတို့လူသားဝိညာဉျနှဈခုအကွား လြှပျစဈဝါယာနှဈခု ပူးမိသညျ့အခါမှာဖွဈသလို မီးပှားတဈခုခုနျ
ကူးသှားသညျဟု ထငျလိုကျရသညျ။ သူ့မှာ နဂိုမူလက ကြှနျတေျာ့အား ပွနျလညျပွုံးပွရနျ ဆန်ဒမရှိဆိုတာ ကြှနျတျောသိသညျ။
သို့သျော ကြှနျတေျာ့အပွုံးက သံတိုငျမြားကွားမှနေ၍ သူ့ထံခုနျကူးသှားပွီးသညျ့နောကျတှငျ သူ့နှုတျခမျးပျေါ၌လညျးအပွုံးတဈ
ခုပျေါလာသညျ။ သူကကြှနျတေျာ့စီးကရကျကို မီးညှိပေးပွီးနောကျ အနားမှခှာမသှားသေးဘဲ ကြှနျတေျာ့မကျြလုံးမြားကို
စူးစိုကျစှာပငျကွညျ့ကာ ပွုံး၍နသေညျ။ ကြှနျတျောလညျး သူ့ကိုဆကျ၍ပွုံးကွညျ့နသေညျ။သူသညျ အခြုပျထောငျစောငျ့
တဈယောကျမဟုတျတော့၊သူကိုလူတဈယောကျအဖွဈ ကြှနျတျောမွငျနပွေီ၊ ကြှနျတေျာ့ကို သူကွညျ့ရှုပုံ၌လညျး အဓိပ်ပာယျ
သဈတှပေါလာပွီ။ `ခငျဗြားမှာ သားသမီးရှိလား´သူကမေးသညျ။ `ရှိပါတယျခငျဗြ၊ ဟောဒီမှာ ဟောဒီမှာ´ ကြှနျတျော ပြာပြာသလဲ
ပိုကျဆံအိတျကိုဖှငျ့ကာ ကြှနျတေျာ့ မိသားစုဓာတျပုံကို ထုတျယူပွီး သူ့အားပွသညျ။ သူလညျး သူ့ကလေးမြားဓာတျပုံတှထေုတျလာကာ
သညျကလေးတှနှေငျ့ပတျသကျသညျ့ သူ့အစီအစဉျမြား၊ စိတျကူးမြား၊ သူတို့အတှကျ မြှျောမှနျးထားသညျမြားကိုပွောပွနသေညျ။
တဖွညျးဖွညျး ကြှနျတေျာ့မကျြလုံးထဲမှာ မကျြရညျတှအေိုငျလာသညျ။ ကြှနျတေျာ့မိသားစုကို ကြှနျတျောမတှရေ့တော့မှာ
စိုးရိမျထိတျလနျ့လှကွောငျး၊ သညျကလေးတှကွေီးပွငျးအောငျ စောငျ့ရှောကျနိုငျခှငျ့မရှိတော့မှာ ပူပနျနသေညျ့အကွောငျးမြား
ကြှနျတျောပွောမိသညျ။ ကြှနျတေျာ့စကားတှနေားထောငျရငျး သူ့မကျြလုံးမှာလညျး မကျြရညျတှရေဈဝဲလာသညျ။ သညျ့နောကျမှာမူ
ဘာစကားတဈခှနျးမှမပွောဘဲ သူကရုတျတရကျ ကြှနျတေျာ့ကို အပွငျထုတျသညျ။ အခြုပျထောငျပွငျဘကျရောကျလာပွီးနောကျ
လမျးကွိုလမျးကွားမြားအကွား တိတျဆိတျစှာပငျဖွတျသနျးချေါဆောာငျလာပွီး မွို့စှနျနားရောကျသညျ့အခါ ကြှနျတေျာ့ကိုလှတျပေး
လိုကျသညျ။ ထို့နောကျ နှုတျဆကျစကားတှဘောတှလေညျးပွောမနတေော့ဘဲ မွို့ဘကျဆီသူလှညျ့ပွနျသှားသညျ။ `
ကြှနျတေျာ့အသကျကို အပွုံးတဈခုက ကယျဆယျလိုကျခွငျးပတေညျး။´ မှနျသညျ။ ဟနျဆောငျမှုကငျးသောကွိုတငျကွံရှယျခကျြ
မပါသော ပငျကိုသဘာဝအပွုံး၊ သို့မဟုတျ လူနှဈဦးအကွား အရိုးသားအပှငျ့လငျးဆုံး ပေါငျးကူးဆကျသှယျမှု။ ဆနျတကျဆူပရေီ၏ သညျဝတ်ထုလေးကို အလုပျခှငျမှာ ကြှနျတျောပွောပွလရှေိ့သညျ။ အဓိကရညျရှယျခကျြကတော့ ကြှနျတျောတို့တဈတှမှော
ဂုဏျသိက်ခာတှေ၊ ဘှဲ့ထူး ဂုဏျထူး ရာထူးအဆငျ့အတနျးတှေ၊ ကိုယျ့ကိုအမြားကဘယျလိုမွငျစခေငျြသညျဟူသော
ကိုယျပိုငျသတျမှတျခကျြတှေ အလှာအထပျထပျဖုံးကာ ကိုယျ့ကိုယျကို ကှယျကာထားကွသညျ။ သို့သျော ဘာတှဘေယျ
လိုဖုံးဖုံးအောကျဆုံးမှာတော့ တကယျ့လူပုဂ်ဂိုလျအစဈအမှနျက ရှိနသေညျဆိုတာ သိကွမွငျကွစလေို၍ပဲဖွဈသညျ။
အဲသညျအတှငျးပိုငျး အနကျအရှိုငျးထဲကအရာကို ၀ိညာဉျဟုပဲ ကြှနျတျောဆိုလိုကျပါမညျ။ ကြှနျတေျာ့ကိုယျတှငျးက အဲသညျဝိညာဉျဟု
ကြှနျတျောအမညျပေးလိုကျသော အစိတျအပိုငျးနှငျ့သငျ့ကိုယျတှငျးက အလားတူအစိတျအပိုငျးတို့ အပွနျအလှနျသိကြှမျးကွပွီဆိုလြှငျ
ကြှနျတျောတို့ဘယျနညျးနဲ့မြှရနျသူတှမေဖွဈနိုငျ၊ ကွောကျရှံ့ထိတျလနျ့ခွငျး လညျးမရှိနျိုငျတော့။ ယခုတော့ ကြှနျတျောတို့ တဈသကျပတျလုံး ကွိုးစားတညျဆောကျထားကွသညျ့ အလှာအထပျတှေ ရဈပတျဖုံးကှယျနသေညျ့အတှကျ တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ
အစဈအမှနျမတှဆေုံ့နိုငျကွဘဲရှိနသေညျ။ ဆနျတကျဇူပရေီ၏ ၀တ်ထုက ၀ိညာဉျနှဈခုအပွနျအလှနျတှထေိ့ သိမွငျသှားကွသညျ့
ထူးခွားသောအခိုကျအတနျ့လေးအကွောငျး ရေးဖှဲ့ထားခွငျးဖွဈသညျ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး အဲသညျလိုအခိုကျတနျ့လေး
တခြို့တော့ ကွုံဖူးပါသညျ။ ဥပမာ တဈခုပွောရလြှငျ တဈစုံတဈယောကျကို ရုတျတရကျ ခဈြကြှမျးဝငျသှားမိခွငျးမြိုးဆိုပါစို့။
နို့စို့အရှယျကလေးငယျမြားနှငျ့တှရေ့သညျ့အခါမြိုးမှာလညျး အလားတူဖွဈမိတတျကွသညျ။ သညျလိုကလေးငယျမြိုးကိုတှရေ့သညျ့
အခါ ကြှနျတျောတို့ဘာကွောငျ့ ပွုံးမိတတျကွသလဲ။ အပျေါယံလှာတဈခုမှ ကှယျကာထားခွငျးမရှိသူတဈဦးကို တှလေို့ကျမွငျလိုကျရ၍လား။ သူ၏အပွုံးမှာဟနျဆောငျမှုအကငျးဆုံးအပွုံး၊ အစဈမှနျဆုံးအပွုံးဖွဈကွောငျး ကြှနျတျောတို့သိနကွေ၍လား။ ဒါမှမဟုတျ
ကြှနျတျောတို့ရငျထဲရှိ ငယျဝိညာဉျက ရှယျတူအခငျြးခငျြး သိကြှမျးခငျမငျကာ နှဈလိုအားရစှာ ပွုံးလိုကျမိခွငျးလား။
[မူရငျး။ ။Hanoch McCarty ၏ The Smile] ( ဆရာဖမွေငျ့၏ နှလုံးသားအာဟာရစာအုပျမှ ကူးယူဖျောပွခွငျးဖွဈပါသညျ…….)
Categories:	Books	/ No Responses / by MM Book City 28/06/2018